Magaalada Garowe oo laga furay mashruuca kobcinta waxbarashada Gabdhaha Soomaaliyeed(Cod+Sawiro) • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Magaalada Garowe oo laga furay mashruuca kobcinta waxbarashada Gabdhaha Soomaaliyeed(Cod+Sawiro)
Magaalada Garowe oo laga furay mashruuca kobcinta waxbarashada Gabdhaha Soomaaliyeed(Cod+Sawiro)
October 7, 2013 - By: Abdirahman Abdi
Waxaa magaalada Garowe ka dhacday gaar ahaan xarunta hay’adda cilmi Baarista Puntland ee PDRC munaasabadtaasi oo lagu daahfurarayay mashruuca kobcinta waxbarashada Gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland.
Waxaa xafladda ka soo qeybgalay masuuliyiin ka socotay hay’adaha Relief,Care,AdRA, GRT iyo marti sharaf kale.
Mashruucan waxaa si wada jir ah uga fulinaya deegaanada Puntland Hay’daha Relief International. Care International, ADRA, GRT, iyo Hay’adda CFPT.
Waxaa mashruucani socon doona muddo 3 sano ah si loo kordhiyo helista waxbarashada gabdhaha nugul ama ka soo jeeda qoysaska faqriga ah gaar ahaan kuwa aan waxbarashada awood u lahayn ee dhamaaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida magaalooyinka, miyiga, reer guuraaga iyo dadka dalka gudihiisa ku barakacay. (IDPs)
Waxa uu mashruucani ujeedadiisu tahay in la horumariyo helista waxbarasho tayo leh iyadoo la dhisi doono fasalo waxbarasho iyo agabyo kale ee waxbarasho, Tacliin natiijo fiican leh si loo helo waxaa la tababari doonaa macalimiinta.
Waxa uu sidoo kale ujeedadiisu tahay mashruuca in waxbarasho ay helaaan isla markaana ay dhamaystaan dugsiyada 20.000 oo gabdho ah kuwaas oo ka soo jeeda qoysaska faqriga ah, kuwa tabaalaysan, kuwa ka soo jeeda qoysaska aan waxba haysan ee dhamaan gobolada Puntland.
Masuuliyiintii ka soo qeybgashay madasha ayaa khudbado ka soo jeediyay oo lagu taagerayay mashruuca.
Agasimaha guud ee hay’adda Relief Internaional Maxamad Cabdullahi oo ka mid ahaa dadkii ka jka hadlay meesha ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa
Mudanayaal iyo marwooyin, Martida Sharafta leh.
Maanta, fursad weyn ayay ii tahay inaan goob joog ka ahaado xafladdan lagu daahfurayo mashruuca kobcinta waxbarashada Gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan Puntland.
Sidaan dhamaanteen ka warqabno dalka Soomaaliya waxa uu si aad ah uga dhacsanyahay gaarista Hadafyada horumarineed ee qarniga ee loo yaqaan (Millennium Development Goals (MDG) gaar ahaaan kuwa la xiriira kobcinta haweenka iyo gabdhaha.
Horumaradii iyo balanqaadyadii ugu dambeeyay ee ay samaysay dawladda Soomaaliya iyo Hay’adaha ka shaqeeyaha horumarka. Tusaale ahaan shirkii New deal ee Soomaaliya. Iskaashiga caalamka ee waxbarashada gabdhaha iyo mashruuca (Go to schools) aada dugsiyada waa kuwa muujiynaya in talaabooyin wax ku ool ah oo ku salaysan sidii loo gaari lahaa bartilmaameedka hadafyada qarniga (MDG) ay socdaan.
Warbixin caalamiga ah oo laga sameeyay sanadkii 2012 , hal ku dhega in dhamaan waxbarasho dadku helaan (Education for All) waxa uu tilmaamayaaa in heerka uu haatan marayo hadafka caalamiga ah ee waxbarashada aas aasiga la waayi doono qayb weyn waxa uuna si gaar ah u xaqiijiayay in wadamada Saxaraha ka hooseeya (Sub-Saharan Countiries in Afirca) ay yihiin kuwo loo tirinayo in kala bar caruurta dugsiyadu aysan aadin caalamka
Sidoo kale, warbixintu waxa ay tilmaamaysaaa in nuglahaashaha haweenka iyo gabdhaha awgiis la siiyo ahmiyad weyn sinaanshaha jinsiga ee xagga waxbrashada.
U sinaan la’aanta jinsiga (Gabdhaha iyo wiilasha) ee xagga waxbarashada waa mid soo bilaabata xiliga caruurnimada waana arin saamayn ku leh dhamaan marxaladaha nolosha gabdhaha taas oo saamayn xuna ku yeelata sidii gbadhuhu ku heli lahaayeen waxbarashada iyo kobcinta awoodooda la xiriirta sidii ay waxbarashada uga faa’iidaysan lahaayeen si noloshooda wax uga bedelaan.
Warbixintu waxa ay sidoo kale xustay in 759 Malyan oo aan waxba qorin waxbana akhrinin ay yihiim dhalinyarada iyo dadka waaweyn. Taas oo 2 meelood ay yihiin haween iyo gabdho.
Inagoo ka warqabna in gabdhaha iyo haweenka Soomaaliyeed ay la kulmaan caqabado ku wajahan sidii ay uga qayb geli lahaayeen nidaamka maamul dhisid, waxaanu dhamaanteen ognahay in helista waxbarasho tayo leh oo aas aasi ah loona simanyahay iyo adeeg caafimaad ay yihiin furaha isbedelka marxaladaha dalka uu marayo.
Inkastoo faa’iidooyin badan laga sameeyay waxbarashada sanadihii la soo dhaafay, kala duwanaansho ayaaa ka jiray dhamaan gobolada Puntland marka loo eegyo dhinacyada helista waxbarasho tayaysan ee dugsiyada hoose iyo kuwa saraba.
Marxaladani waa mid run ah marka la fiiriyo miyiga iyo meelaha fog fog halkaas oo ay dugsiyaddu u halgamaan sidii ay u bixin lahaayeen warbarasho tayo leh iyadoo ay yartahay tirade macalimiinta ah ee ku nagada iyo agab waxbarasho oo aan ku filnayn.
Sidaa daraateed caruurta reer miyiga ah waxay dhamaantood wajahaan caqabado tixgelin mudan sidii ay ku heli lahaayeen waxbarasho tayo leh marka la bar bardhigo caruurta ku nool magaalooyinka.
Gaar ahaaan gabdhaha ayay saamayn weyn ku leedahay. Tusaale ahaaan miyiga. Gabdhaha waxbarta 2/3 ma tagaaan dugsiyaa marka loo eego gabdaha magaalooyinka jooga. Ama 4/7 gabdhaha jooga magaalooyinka ay kaga hooseeyaaan wiilasha xagga waxbarashda. Xitaa marka gabdhaha dugsiyada la geeyo waxaa dhacda in gabdhuhu aysan si dhab ah u xaadirin dugsiyada.
Balanqaayadeen iyo sida ay inooga go’antahay mashruucan Maanta waaa mid dhab naga ah isla markaana aynu jecelnahay si aynu u wanaajino xaaladaha nolosha ugana jawaabno xaaladaha deg deg ah, korna u qaadno tayada iyo sinaanta waxbrashada, horumarinta adeegyada caafimaad inagoo xoojin doonaa habka waxbarasho, dhisi doonana nidaamka waxbarasho ee Puntland si aynu ugu adeegno dhamaan dadka si siman inagoo u eegaynin Jinsi, qabiil ama deegaanba.
Waxaan u mahad celinayaaa dawladda Puntland iyo dhamaan shacabkeeda taageerada joogtada ah ee ay u sameeyeen waxbarashada sanadihii la soo dhaafay.
Mudanayaal iyo marwooyin, waxaynu maanta madashan isugu nimad daahfurka Mashruuca “KOBCINTA WAXBARASHADA GABDAHA” (Somalia Girls Education Promotion Programme) hal ku dhigiisana uu yahay “Waxbar gabdhaha, Cirib tir faqriga” Mashruucan waxaa maal geliyay dawladda UK. (DFID) waxa uuna ka mid yahay mashruuca kobcinta waxbarashada caalamka oo dhan.
22 Wadan ayaaa qayb ka ah hal abuurkan, Hay’adaha CARE, Relief International iyo daneeyaasha mashruucan waxay maareeyeen in loo helo Miisaaniyad lagu fuliyo mashruucan aan maanta daah furayno.
Mashruucani waa mashruuca socon doona muddo 3 sano ah si loo kordhiyo helista waxbarashada gabdhaha nugul ama ka soo jeeda qoysaska faqriga ah gaar ahaan kuwa aan waxbarashada awood u lahayn ee dhamaaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida magaalooyinka, miyiga, reer guuraaga iyo dadka dalka gudihiisa ku barakacay. (IDPs)
Mashruucani waxaa ujeedadiisu tahay in la horumariyo helista waxbarasho tayo leh iyadoo la dhisi doono fasalo waxbarasho iyo agabyo kale ee waxbarasho, Tacliin natiijo fiican leh si loo helo waxaa la tababari doonaa macalimiinta.
Sidoo kale Mashruucani waxa uu la shaqayn doonaa dhamaan bulshada, qoysaska, hogaamiyaasha dhaqanka, culimada, dawladda Puntland waxaana hadafkeenu yahay inaynu si midaysan uga soo baxno caqabadaha dhaqan dhaqaale ee haysta tacliinta gabdhaha.
Relief Internaitonal, CARE iyo daneeyaasha kalaba waxa ay raadinayaan inay hagaajijaan helista waxbarasho isla markaana xoojiyaaan helista natiijo fiican, lana kordhiyo dalabka waxbarasho tayo leh.
Waxaan rabaa inaan xuso mar labaad in Hay’adaha CARE iyo Relief International iyo daneeyaasha kalaba inay sii wadi doonaa la shaqaynta dawladda Puntland, deeq bixiyaasha, ururada caalamiga ah sida kuwa Qaramada midoobay si loo kordhiyo heslista waxbarasho tayo leh oo la simanyahay lana gaaro hadafka ah in waxbarashada dhamaan loo sinaado kaas oo ku xusan Istaraatiijiyada waxbarasho ee Puntland.
Ugu dambayntii waxaan ku baaqayaaa in dhamaanteen aynu gacmaha is qabsano, la nimaano dadaal si aynu u soo afjarno faqriga inagoo waxbarayna gabdhaheena isla markaana si guul leh u fulino Mashruucan kobcinta tacliinta gabdha iyo dhamaynta faqriga.
Waxaan ku soo gaba gabaynayaaa balanqaadkeena midaysa hal ku dheg ay jeedisay Boqorad Rania Al Cabdullahi ee dalka Joordan taas oo qayb ka ahayd warbixintii caalamka ka soo saaray sinaanta tacliinta sanadkii 2011. hadalkaas oo si gaar ah u xoojinayay tacliinta gaar ahaan tacaliinta gabdhaha iyo kor u qaadista amniga iyo horumarka bini’aadamka oo dhan.
Halkan ka dhegeyso khudbadihii laga soo jeediyay xafladda
“Tacliintu waa naxariisteena kaydka ah, fursadeena ugu wanaagsan ee lagu keeni karo amni iyo horumar dhamaan bini’aadamka oo dhan”
Horseed Media 2013.